DAAWO VIDEO: Sheekh Kenyawi oo raali-geliyay Dumarka Soomaaliyeed, “Runtii Khaladkayga waan garowsaday” | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: Sheekh Kenyawi oo raali-geliyay Dumarka Soomaaliyeed, “Runtii Khaladkayga waan garowsaday”
Sheekh Kenyawi /Photo: Screenshot Halqaran.com
Nairobi (Halqaran.com) – Sheekh Maxamed Ibraahim Kenyawi oo ka mid ah cullimada caanka ah ee Soomaaliya, ayaa raali-gelin ka bixiyay hadal uu dhawaan siidaayay oo ahaa, in dumarka oo guurka Waxbarashada uga daaha aysan wax faa‘ido ah lahayn, loona baahan yahay in ay yaraanta ku guursadaan.
Wuxuu Sheekh Kenyawi tilmaamay, in siyaabo Khaldan loo turjumay hadalkiisii hore, codkiisana la isku jarjaray, balse waxaa uu qirtay inuu ka dhacay gef, Wuxuuna xusay inuu ka xun yahay wixii dhacay, isagoo caddeeyay inaanu kasoo horjeedin waxbarashada gabdhaha, balse uu ku talinayay in ay dumarku yaraanta ku guursadaan.
“Waxaad ogaataan Soomaalaay inaanan diidanayn waxbarashada dumarka, bal aan dhiirri galinayo, oo aan weliba garab taaganahay in dumarku waxbartaan. Maxaa yeelay waxbarashada dumarku waa waajib diini ah,” ayuu yiri Sheekh Kenyawi.
Dad badan oo ku xiran baraha bulshada una badan dumar, ayaa si aad ah uga falceliyay hadalka Sheieh Kenyaawi uu raali-gelinta ka bixiyay, waxayna wadaadku ku eedeeyeen inuu kasoo horjeedo waxbarashada dumarka.
Halka hoose ka daawo Muuqaalka raali-gelinta Sh. Kenyawi:
Sheekh Kenyawi oo raali-geliyay Dumarka Soomaaliyeed